ओस्कारका विद्यार्थीले वनाउने भए चलचित्र, नाम सावा व्याज !::Ranga post
ओस्कारका विद्यार्थीले वनाउने भए चलचित्र, नाम सावा व्याज !
काठमाडौं – चलचित्र सम्वन्धी विभिन्न विषयमा पढाई हुने नेपालको पहिलो कलेज ‘ओस्कार इन्टरनेशनल कलेज’ का विद्यार्थीहरुले चलचित्र निर्माण गर्ने भएका छन् । ‘सावा ब्याज’ नाम राखिएको सिनेमाको मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक रुपमा निर्माण घोषणा गरियो ।
सिनेमाले समाजमा घटिरहेको यथार्थ घटनालाई देखाउने डेब्यु निर्देशक देविन राईले बताए । कात्तिकको तेस्रो साताबाट फ्लोरमा निस्कन लागेको सिनेमामा ओस्कार कलेजमा अभिनय पढिरहेका विद्यार्थी प्रवेश महतरा क्षेत्री र रश्मी श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहनेछ ।
करीब ३ बर्षको अध्ययन र मिहिनेत पश्चात् ओस्कार कलेजका विद्यार्थीहरुले उक्त सिनेमा निर्माण गर्न लागेका हुन् । आशिष लिम्बुको छायांकन रहने सिनेमाको सम्पुर्ण छायांकन पूर्वीय पहाडी भेग तथा मकालु र काठमाडौंमा हुनेछ ।
निकै कम लगानीमा निर्माण हुन लागेको सिनेमालाई देगेन्द्र कुमार राई र बिपिन राईले संयूक्त रुपमा निर्माण गर्न लागेका हुन् । सिनेमा कलाकार प्रवेश र रश्मीले कथावस्तु उत्कृष्ट लागेका कारण सिनेमामा काम गर्न लागेको बताए ।